बानेश्वरमा यसरी भिडे कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी : झडपका क्रममा दुई डीएसपीसहित ११ प्रहरी सहित तीन दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते (फोटो फिचरसहित) – Etajakhabar
बानेश्वरमा यसरी भिडे कांग्रेस कार्यकर्ता र प्रहरी : झडपका क्रममा दुई डीएसपीसहित ११ प्रहरी सहित तीन दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौँ — डा. केसीकाे समर्थनमा तरुण दलले अायाेजना गरेकाे प्रदर्शनमा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेकाे छ । शनिबार बानेश्वरमा निशेधित क्षेत्र ताेड्न खाेजेकाे भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेकाे हाे । प्रहरीले ८ राउण्ड ग्यास प्रहार गरेकाे छ । झडपमा तरुण दलका अध्यक्ष जीतज‌ंग बस्नेतसहित केही प्रदशर्नकारी र एक प्रहरी घाइते छन् । घाइतेहरुको बानेश्वरस्थिति सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रर्दशनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, नेपाली कांग्रेसका नेताहरु तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सहभागीता थियो । गोविन्द केसीको समर्थनमा अहिलेसम्म हुँदै आएको शान्ति आन्दोलनले शनिबारबाट नयाँ रुप लिएको छ ।
प्रहरीले रोक्न खोजेपछि बानेश्वरमा तनाव देखियो । बानेश्वरको एकातिर डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरुको सभा चलिरहेको थियो भने अर्कोतिर कांग्रेसले निषेधाज्ञा तोड्न खोज्यो ।
कांग्रेसका कार्यकर्ताले ढुंगा हान्न थालेपछि झडप भयो । प्रहरीले अश्रुग्यासका साथै लाठी हानेको थियो भने प्रर्दशनकारीले ढुंङगा प्रहार गरेका थिए । यसले नयाँवानेश्वर क्षेत्र तनाबग्रस्त बन्यो । तरुण दलका कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई बुद्धनगर र बबरमहलसम्म लेखेटेको थियो ।
झडपका क्रममा दुई डीएसपीसहित ११ प्रहरी र तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंगबस्नेतसहित तीन दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०५, २०७५ समय: १६:४६:२३